WARBIXIN: Real Madrid Oo Ay Ka Soo Dagi Doonaan Laba Xiddig Oo Waaweyn ka Hor Bilaabashada Xilli Ciyaareedka Cusub – Kooxda.com
WARBIXIN: Real Madrid Oo Ay Ka Soo Dagi Doonaan Laba Xiddig Oo Waaweyn ka Hor Bilaabashada Xilli Ciyaareedka Cusub
Real Madrid ayaa Cristiano Ronaldo u ogolaatay in uu ku biiro kooxda Juventus laakiin haatan waxa ay bilowday in ay dhisto koox cusub taas oo la macno ah in laba xiddig oo waaweyn iman doonaan kooxda si ay arintaas ugu suurtagasho.
Xiriirka madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez iyo xiddiga reer Portuga ayaa xumaa,si kasta ha ahaatee Madaxweynaha kooxda ayaa haatan wajahay shaqo adag oo ah in uu buuxiyo booska uu baneeyay xiddigii hore ee Man Unitd.
Qof walba oo ay ka mid yihiin taageerayaasha, maamulka kooxda iyo waliba xiddigaha kooxda ayaa Perez ka sugaya in uu kooxda keeno xiddig la tayo ah Ronaldo laakiin qaabka suuqa ayaa haatan is badalay wayna adagtahay in ay xiddigo fiican si fiican lagu helo.
Los Blancos ayaa guulo gaari karta la,aanta Ronaldo laakiin waxa ay u baahan yihiin in ay keenaan saxiixyo ka caawiya in ay tartamaan kaas oo dhalin kara goolal sidii 33 jirka reer Portugal.
Qorshaha kooxda ayaa ah in ay la soo saxiixdaan laba saxiix oo waaweyn iyada oo la sugi doono xiddigaha ay noqon doonaan laakiin laba xiddig ayaa kooxda iman doona.
Ma Jiro xiddig balan qaadi kara 50-kii Gool ee uu dhaliyay Ronaldo,Julen Lopetegui ayaana looga baahan yahay in uu keeno qorshe uu kooxdiisa uga keeno in ay goolalkii Ronaldo buuxiyaan.
Kooxda Real Madrid ayaa haysata lacag laakiin si ay ula soo saxiixdaan xiddigaha ay doonayaan waa in ay xiddigaha ka helaan caawin kooxohoodana ku qasbaan in ay ka tagaan kooxda si ay ugu biiraan Real.
Neymar ayaa ah xiddiga dookha 1-aad ee Real Madrid laakiin si ay u helaan xiddiga reer Brazil waxa loo baahan yahay in uu xiddigii hore ee Barcelona maamulka PSG ku qasbo in uu ku biiro kooxda Real si ay PSG u sheegato qiimaha ay ku iibinayso xiddiga.
Kylian Mbappe ayaa ah bartilmaameed kale laakiin way adkaan doontaa in ay helaan adeegiisa hadii uuna xiddigu dhankiisa ka caawin Los Blancos.
Xiddiga ay u badantahay in uu yimaado Bernabeu ayaa ah Eden Hazard xilli uu xiddiga reer Belguim dhawr jeer sheegay rabitaankiisa ah in uu ku biiro kooxda Real Madrid waxana ay Chelsea dalban doontaa 100 milyan iyo wax ka badan.
Kadib qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee koobak adduunka Russia 2018 shaki la,aan Harry kane ayaa ku jira liiska tukaamaysiga Los Blancos laakiin heshiiskan ayay adagtahay in uu si dhib yar ku dhoco marka loo eego in uu xiddigu dhawaan heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Tottenham